Camille Vital:NAMPAMONO MANAMBONINAHITRA -
AccueilRaharaham-pirenenaCamille Vital:NAMPAMONO MANAMBONINAHITRA
23/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tratran’ny aretin’ny fahefana sy ny seza! Izay no azo iantsoana ny jeneraly Camille Vital, praiminisitra nandritra ny Tetezamita. Nilatsaka hofidiana filoham-pirenena ny taona 2013 kanefa tsy lany. Mbola nilatsaka hofidiana ben’ny tanàna ihany koa saingy tsy lany hatrany. Tsy nanao afa-tsy ny nanangona faharesena no nataony taorian’ny tsy naha praiminisitry ny Tetezamita azy.
Niaka-dapa indray anefa ity jeneraly ity omaly ary efa nampoizina mihitsy iny fihetsiny iny noho izay aretim-pahefana sy seza miboiboika ao aminy izay. Tsy mandingana mihitsy raha vao misy tranga miseho, araka ny antsoina amin’ny teny vahiny hoe “récupération politique”. Tsy mety voafafan’ny jeneraly Camille Vital tokoa mantsy ny rano nandoto ny tavany tamin’ny ampamoaka nataon-dRajoelina momba azy, dia ny fikasan’ity praiminisitry ny HAT ity hamono ho faty ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Heveriny hanova ny fomba fahitan’ny olona azy angamba ny fanakianana nataony amin’ny fitondrana manodidina ny fisamborana an’i Augustin Andriamananoro.
Ny jeneraly Camille Vital avokoa no nanome ny baiko rehetra tamin’ny fanafihana ny FIGN, BANI sy RFI Ivato, ny fisamborana ireo jeneraly sy kolonely tsy nitovy hevitra tamin-dRajoelina. “Namono namana” no nisokajian’ny fianakaviamben’ny Tafika ny tenany. Mba nitsangana niaro ireo manamboninahitra niharan’ny herisetran’ny FIS sy ny miaramilan-dRajoelina notarihan’ny kolonely Fidy ireny ve ny jeneraly Camille Vital? Firy amin’ireo manamboninahitra nosamborina sy nampidirina am-ponja nandritra ny Tetezamita ireny no nitondra takaitra mandra-pahafatiny!